Meksika: Florence Cassez, Meloka Amin’ny Fakàna An-keriny Sa Nizaka Fanamboamboaran-javatra? · Global Voices teny Malagasy
Meksika: Florence Cassez, Meloka Amin'ny Fakàna An-keriny Sa Nizaka Fanamboamboaran-javatra?	Voadika ny 26 Janoary 2013 13:48 GMT
Zarao: Sahotaka be no nitranga tao amin'ny habaky ny cyber taorian'ny namotsoran'ny fonja Meksikana an'ilay teratany frantsay Florence Cassez izay nisy azy nandritra ny fito taona, voaheloka noho ny fakàna an-keriny, fitànana fitaovam-piadiana tsy nahazoana alàlana ary fanaovana heloka bevava nomanina. Ny famerenan'ny Fitsarana Tampony nandinika manontolo ny dingam-pitsarana mikasika ny raharahany dia nampiseho fisalasalàna sahaza momba ny fandraisany anjara tamin'ny heloka niampangàna azy sy nanaporofoana fa tafalatsaka teo anelanelan'ny raharaha iray i Florence, izay etsy andaniny, ny departemantan'ny polisy nila nàka ny fon'ny olona, ireo filoha roa teo aloha sy ny tombontsoany mifanohitra: Calderon (Meksika) sy Sarkozi (Frantsa), ary ny vahoaka mikatsaka ny rariny.
Tamin'ny taona lasa ny mpanoratra avy ao amin'ny blog de La_Morsa [es] dia namoaka hoe :
Florence Cassez. Sary nozaraina betsaka tamin'ireo sehatra firesahana tany anaty Aterineto.
Ny ampahany amin'ny saritaka dia niainga avy amin'ny fisamborana namboamboarin'i Garcia Luna, sekreteram-panjakana ankehitriny misahana ny Fandriampahalemana, izay nampisehoany karazana hetsika iray misy andianà mpaka an-keriny tratry ny tsy nampoizina tao anaty trano tsara ambina ary ireo nalaina an-keriny avotra soa aman-tsara. Ny zava-nisy dia nisy mpanao gazety sy mpaka sary teny an-toerana ary dia hay moa ka namboamboarina daholo ny zavatra rehetra. Olona efa voasambotra ry zareo ary dia hevitra nitsiry tao amin'izy ireo ny hamorona karazan-tseho hanaporofoana ny fahaiza-manaon'ny polisy eo imason'ny media.
Mizarazara be ny fomba fijery eny anivon'ireo mpisera anaty aterineto, miainga avy amin'ireo izay tezitra tamin'ny famotsorana an'ilay vehivavy frantsay ka miampanga ny manampahefana ho mametraka ny zon'ilay voampanga ho eo ambonin'ny zon'ireo nalaina an-keriny; tonga any amin'ireo izay manohana ny fanapahan-kevitra noho ny tsy fetezan'ny dingana natao ka nitarika tany amin'ny fisalasalàna momba ny maha-meloka an'i Florence Cassez. Ilay raharaha, ambonin'ny zavatra rehetra, dia nampiseho tamin'izao tontolo izao ny maha-marefo ny rafi-pitsarana Meksikana ary ny fillalaovana ny media izay efa hatrizay no feno zava-maha-be resaka.
Ireo izay mankasitraka ilay famotsorana, ankoatra ireo lahatsoratra maro, dia mitanisa ny famoahana natan'ny gazetiboky Proceso tamin'ny 13 Martsa, 2012 izay amintinan-dry zareo antony 25 anafahana an'i Florence Cassez [es]. Ireto ny sasany amin'izy ireny :
Satria ilay sarintsarim-pisamborana, nampanaovin'i Genaro Garcia Luna, nanitsakitsaka ny tsy fanameohana olona tsy mbola nandalo fitsarana. Dia nivadika ho nahiahiana ho meloka izy.
Satria tao anatin'ilay fanambaràna voalohany nataon'ireo nalaina an-keriny, tsy afaka nanamarina tamin'ny alalan'ny fampifanatrehana azy tamin'i Florence Cassez i Christian Ramirez sy Cristina Rios Vallladares, eny fa na ny feony aza. Nampian'i Cristina Rios fa nampahafantatra azy ny manamboninahitra avy amin'ny AFI [Masoivoho Federaly Misahana Fanadihadiana] fa hoe nandray anjara tamin'ny fakàna azy an-keriny i Florence Cassez.
Satria ny fanambaràna voalohany nataon'i Florence Cassez dia noraisina talohan'ny nahafahany nifandray tamin'ny manampahefana avy amin'ny masoivohon'ny fireneny, araka izany dia nanitsakitsaka ny Fifanarahan'i Vienne.
Nampamera-panontaniana ny maro mpampiasa aterineto ny fanavahana manokana natao an'i Cassez miohatra amin'ireo tranga hafa mampiahiahy ihany koa. Tahaka ny an'ilay fikambanana Iluminemos México [es] (Areheto i Meksika) (@iluminemos) [es]:
@iluminemos: Nahazo fitsarana sahaza azy ve ireo any am-ponja Meksikana amin'izao fotoana? Sa nomena fikarakarana miangatra i #Cassez ?
Epigmenio Ibarra (@epigmenioibarra) [es], mpanao gazety sady mpamokatra fandaharana, dia nanolo-kevitra ny hamerenana mandinika hoe an'iza ny heloka :
@epigmenioibarra: Raha nafahana i #Cassez, dia tokony handeha hiditra any am-ponja i Genaro Garcia Luna, ilay mpikarakara seho amboamboarina ho an'ny fahitalavitra, sa ahoana hoy ianareo?
Etsy ankilany, ilay Meksikana mikatroka mafàna fo, Claudia (@ClauVillegasm) nilaza hoe :
@ClauVillegasm: Ato amin'ity firenena ity, mamono ny alika, mandrotika sy manolana ary avela halalaka ny mpaka an-keriny. Ary dia afahana ry zareo satria tsy najaina ny zony. #casocassez [raharaha Cassez]
Mandritra izay, nanontany i Rodimiro Trollotzin (@Dios_Tollotzin) [es] mpampiasa Twitter hoe :
@Dios_Tollotzin: Raha Meksikana iray (lahy na vavy) no maka an-keriny sy mandrotika any Frantsa, ho afahana ve izy satria fotsiny hoe nisy tsy nety ny fandehan'ny fitsaran-dry zareo? #CasoCassez #cassez
I Fernanda Familiar (@qtf) [es], mpanao gazety, dia niresaka mikasika ny fomba fijerin'ireo niharam-boina ilay fanapahan-kevitra:
@qtf: Nafahan-dry zareo i #Cassez… tsy misy olona miresaka momba ireo niharam-boina mihitsy, ny rarin-tsainy, ny holatra navelany mandrapahafatin-dry zareo. Heloka bevava izao! Tahaka azy.
Monica Garza (@monicagarzag) [es], tahaka ireo maro mpampiasa ny Twitter, dia tezitra koa:
@monicagarzag: Ho ahy, mameno hatezerana sy henatra ahy ny fikàna sary an-tsaina an'ilay mpaka an-keriny Florence Cassez mipetraka mahazo aina tsara ao anaty fiaramanidina iray misdina ho any Frantsa
Ireo hafa, toa ilay mpanoratra an-gazety Julio Hernandez L. (@julioastillero) [es] dia niresaka momba ny fomba nanovàn'ny rafi-pitsarana ny toetsainy (toetsain'ilay rafitra) tamin'ny fotoana nandraisan'ny filoha vaovao ny toerany.
@julioastillero: Anatinà repoblika iraya-tanin'akondro, herinandro iray monja no ilain'ny Fitsaràna hanovàny amin'ny fomba henjana ny toerana misy azy manoloana ny raharaha iray (Cassez) satria miova ny mpifehy.
Ary sasany sahy maminavina ny mety ho fifanarahana nisy teo amin'ny governemanta vaovaon'i Frantsa sy Meksika, toa an'i Diego Ayala (@elcincocuatro) [es]:
@elcincocuatro: Mivandravandra be ny maha-meloka an'i #Cassez, nafahana izy satria namboamboatra tantara tsangana ry zalahy ary satria ny EPN maniry ny ho tsara endrika manoloana an'i Frantsa, ho ela velona lafrantsa e
Namintina i Alberto Velarde (@alberto_velarde) manampahaizana manokana momba ny fifandraisana hoe:
@alberto_velarde: #OpinoEnLaJornada (Fanehoam-pijery ao amin'ny La Jornada) Ny fanapahana avy amin'ny #SCJN (Fitsarana Ambony) dia tsy mikasika ny maha-meloka na tsia an'i #Cassez ; mikasika ny dingana maloto nataon'ny manampahefana io
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraElizabeth
Nandika (en) i Elizabeth
Tantaran'ny Amerika Latina farany 10 ora izayEkoadaoroMpanao gazety Ekoadaoreana voaroaka noho ny sioka manitsinitsy
Amerika LatinaEoropa AndrefanaFrantsaMeksika
Fifandraisana iraisam-pirenenaLalànaMedia sy Fanoratan-gazetyMediam-bahoakaVaovao MafanaZon'olombelona